‘अदृश्य हत्यारा’ कार्बन मोनोअक्साइडले कसरी लिन्छ मानिसको ज्यान? – Health Post Nepal
‘अदृश्य हत्यारा’ कार्बन मोनोअक्साइडले कसरी लिन्छ मानिसको ज्यान?
२०७८ फागुन २४ गते १६:४४
काठमाडौं–ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिका ४ नल्लुमा आइतबार राति एकै घरका ५ जनाको मृत्यु भयो। राति कोइला बालेर झ्यालढोका थुनेर सुतेका उनीहरुको निस्साएिर मृत्यु भएको थियो। कोइला बाल्दा निस्किएको कार्बन मोनोअक्साइडका कारण शरीरमा अक्सिजनको अभाव हुँदा उनीहरुको मृत्यु भएको थियो।
काठमाडौंलगायत मुलुकका धेरै भागमा यस्ता घटना बर्सेनि हुने गरेका छन्। खासगरी जाडो महिनामा कोठा गुम्म पार्न मकल, बाल्ने, ग्याँसगिजर प्रयोग गर्ने क्रममा निस्सासिएर धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
के हो कार्बनमोनोअक्साइड?
कार्बन मोनोअक्साइड कार्बनडाइअक्साइडजस्तै एक प्रकारको ग्यास हो। यो तेल, मट्टितेल, कोइला या काठ जल्ने क्रममा निस्कन्छ। यो वातावरणमा निकै कममात्र पाइन्छ। गाडीमा एसी चलाउँदा, कोइला जलाउँदा, ग्यासहिटर बाल्दा, बन्द कोठामा दाउरा बाल्दा कार्बन मोनोअक्साइड उत्पादन हुन्छ। यो एक रंगहीन र गन्धहीन ग्यास हो। त्यसैले मानिसहरु यसले पारेको प्रभावका बारेमा जानकार नहुँदा यसको विषाक्तताका कारण मृत्युको मुखमा पुग्छन्।
शरीरलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
कार्बन मोनोअक्साइड बढी हुँदा शरीरमा अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ। बढी समयसम्म यसको प्रभाव रहँदा यो ग्यास रगतमा पुग्छ र हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजनको स्थान लिन पुग्छ। त्यसपछि हेमोग्लोबिनमार्फत् शरीरका सबै ठाउँमा पुग्छ।
मानिसको रातो रक्तकोषले अक्सिजनभन्दा कार्बन मोनोअक्साइडलाई चाँडो आफूमा लिन्छ।
लामो समयसम्म कार्बन मोनोअक्साइडको सम्पर्कमा रह्यो भने शरीरमा हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोअक्साइडमा परिवर्तन हुन्छ। शरीरमा अक्सिजन आपूर्ति हुँदैन। यस्तो स्थितिमा सुतेकै अवस्थामा मानिसको मृत्यु हुन्छ। मानिसहरुलाई थाहै हुँदैन, हावामा कार्बन मोनोअक्साइड छ भनेर।
कार्बन मोनोअक्साइडको प्रभावले प्रारम्भिक रुपमा रिंगटा लाग्ने, सास फेर्न कठिनाई हुने, वाकवाकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखिनसक्छ। यस्तै, निर्णयक्षमतामा असर गर्ने, स्मरणशक्ति हराएजस्तो हुनेजस्ता समस्या पनि देखा पर्छन्। अत्यधिक मात्रामा शरीरमा यो ग्यास प्रवेश गरेको छ भने यस्ता लक्षणै नदेखिई मानिसको मृत्यु हुन्छ। थाहै नपाई मृत्यु हुने भएकाले कार्बन मोनोअक्साइडलाई ‘अदृश्य हत्यारा’ पनि भन्ने गरिन्छ।
टाउको दुख्नु, सोच्ने क्षमतामा असर पर्नु, सास फेर्न समस्या हुनु, मुटुको चाल बढ्नु, शरीरको तापक्रम घट्नु, रक्तचापमा कमी आउनु पनि यो ग्यासको विषाक्तताका लक्षण हुन्। रगतमा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा ३० प्रतिशत हुँदा टाउको दुख्ने, थकाई लाग्ने हुन्छ। ४० प्रतिशत हुँदा चेतना गुमाउँछ, बेहोस हुन्छ भने त्योभन्दा बढीमात्रमा भए मृत्युसमेत हुने सम्भावना हुन्छ।
यसबाट खासगरी, गर्भमा रहेका शिशुहरु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ मुटुरोग भएका मानिसहरु बढी प्रभावित हुन्छन्। यस्तै, अत्याधिक कार्बन मोनोअक्साइडको सम्पर्कबाट स्थायी रुपमै मस्तिस्कमा असर पर्ने, मुटुमा असर पर्ने, गर्भपतन हुनेसम्मका समस्या देखा पर्छन्।
सरकारी तथ्यांकले केही दर्जनको संख्या उल्लेख गरे पनि नेपालमा बर्सेनि कति मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। अमेरिको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) का अनुसार कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तताका कारण अमेरिकामा बर्सेनि ४३० मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने ५० हजार मानिसहरु आपतकालीन रुपमा अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्।